सिद्धार्थ बैंकले ३०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न कहिले गर्ने भयो बुक क्लोज ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ बैंकले ३०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न कहिले गर्ने भयो बुक क्लोज ?
काठमाडौं - सिद्धार्थ बैंकले ३०% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न जेठ १६ गत बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यस आधारमा जेठ १५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र सिद्धार्थको हकप्रद भर्न पाउनेछन् । बैंकले १०ः३ अनुपातमा १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८.१३ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न नेपाल धतोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
यो हकप्रदमा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउनेक्रममा सिद्धार्थ ३०% हकप्रदको बाटोमा लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब २५ करोड ८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकले ९५ करोड ७० लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । सिद्धार्थको प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ३० पौस (वार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १५३ रुपैयाँ ७६ पैसा छ ।